Dom » Galitaanada ku sumaysan "gimbal"
DJI Pocket 2 - dib u eegista kamaradda jeebka leh gimbal
dji, jeebka dji 2, jeebka dji 2 abuure combo, gimbal, kamarad, kamaradaha isboortiga, vlog
DJI Pocket 2 waa jiil cusub oo kamarad jeebka lagu rakibo oo lagu dhisay xasilinta 3-dhidibka, shaashadda taabashada iyo awoodaha muuqaalka weyn. Moodelkii ugu dambeeyay wuxuu helay horumarin taas oo hubaal xiisayneysa dadka wax qora. Sidee kaamirada cusub uga shaqeyn doontaa ...
Drony, dib u eegista
DJI OM 4 - Fiidiyoowga xasilinta / Gimbal fiidiyowga taleefanka oo ka socda DJI
dji, gimbal, oh 4, om3, Oslo mobile, Osmo mobile 3, Osmo Mobile 4, dejiyaha
DJI waxay soo bandhigtay xasiliyahii ugu dambeeyay ee taleefanka - OM 4. Sidee buu uga duwan yahay nooca 3 sidoo kale ma ku habboon yahay caaga? Wax walba oo ku jira filimkii ugu dambeeyay!
Fimi PALM - webcam mobayl leh gimbal isku dhafan
Waxa daabacay	Kasia
dji, FIMI, fimi timir, gimbal, gopro, kamarad, xiaomi
"Nolosha gacantaada ku jirta" ereyadaas shirkadda Fimi, oo ah astaanta suuq-geynta ee Xiaomi, waxay xayeysiisaa wax soo saarkooda cusub - Fimi PALM. Waa kamarad lagu rakibay gimbal saddex-geesood ah. Shayga ugu horreeya ee noocan ah - DJI Osmo Pocket -...